Homeरोचक / विचित्रखसीको मासुका परिकारहरु : साँधेको कलेजो देखि खुट्टाको सुप सम्म ! जानीराखौं कसरी बनाउने ?
May 10, 2019 Spnews रोचक / विचित्र, समाचार Comments Off on खसीको मासुका परिकारहरु : साँधेको कलेजो देखि खुट्टाको सुप सम्म ! जानीराखौं कसरी बनाउने ?
जाडो याममा चिसो फाल्न खसीको खुट्टाको सुप निकै उपयोगी हुन्छ । खसीको खुट्टाको सुप आ–आफ्नै तरिकाले पकाएर खाने गरिन्छ ।खसीको मासुको थरि थरिका परिकार बनाएर खाएको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । अधिकांशले यो परिकार मन पनि पराउँछन् । तल पढ्नुहोस विभिन्न प्रकारका खसीको मासुका परिकारहरु :
साँधेको कलेजो :
पहिले पानी उमाल्ने र त्यसमा सिंगो कलेजो डुबाएर आधा घण्टासम्म छोपेर राख्ने । त्यसपछि बाहिर पाकेको र भित्र काँचो कलेजो पर्ने गरी टुक्रा पार्ने । लसुन र अदुवाको पेस्ट, धनियाँको धूलो, आधा कप धनियाँको पात, खुर्सानी -मसिनो गरी काटिएको), रातो खुर्सानीको धूलो स्वादअनुसार, तोरीको तेल झान्नका लागि, नुन स्वादअनुसार राख्ने ।
सुख्खा मासु :
सबैभन्दा पहिले दही फिट्ने, मासुमा एक ठूलो चम्चा तोरीको तेल, बेसार, नुन तथा दही हालेर करिब दुई घण्टा राख्ने, एउटा कराहीमा तेल तताउने, अनि त्यसमा कोरेको अदुवा तथा लसुन हालेर केही बेर भुट्ने, मोलेर राखेको मासु हाल्ने र केही बेर चलाउने । अब आगो सानो गरेर लगभग आधा घण्टा वा मासु नरम हुन्जेलसम्म पकाउने । जब मासु पाकेर सुख्खा हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले टाउकोलाई चार भागमा विभाजन गरेर प्रेसर कुकरमा मासु र हड्डी छुट्टनिे गरी उमाल्ने । त्यसपछि मासु र हड्डी अलग-अलग गरी टुक्रा पार्ने । अब त्यसमा तेलबाहेक सबै मसला हालेर मोल्ने । तोरीको तेलमा मेथी फुराएर झान्ने । धनियाँको पातले सजाएर सर्व गर्ने ।
खुट्टाको सुप :
पिस पारेको एउटा खसीको खुट्टा त्यास्मा अदुवा ,लसुन , खुर्सानी , नुन स्वादअनुसार,र ज्वानो आदि ठिक तरिकाले राखेर बनाएमा यक्दम मिठो हुनको साथै शरीरलाई चाहिने शक्ति समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
ह्याकुलाको छोइला :
सबै भन्दा पहिले ह्याकुला आगोमा पाक्ने गरी पोल्ने । त्यसपछि टुक्रा पारेर आधा घण्टासम्म छोपेर राख्ने । अब त्यसमा तेलबाहेक सबै मसला हालेर मोल्ने । आधा घण्टापछि तेलमा मेथी फुराएर झान्ने । धनियाँको पातले सजाएर सर्व गर्ने ।